“အမေနဲ့အတူ တစ်နှစ်ကျော်ကြာ အမှိုက်ပုံကြီးထဲမှာ ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန် နေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ သမီးလေး ခုတော့ ပျော်နေပြီ” – ရှအေလငျး
ခုတော့ ပရဟိတ လူငယ်လေးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Sai Lu Khay ရဲ့ ကူညီမှုနဲ့အတူ ရပ်မိရပ်ဖတွေရဲ့ ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုးမှုတွေကြောင့် သမီးလေးဟာ ကျောင်းတက်နေပါပြီ
အခုတော့လည်း ပထမတန်းမှာ အသွက်ဆုံး . စကားအတတ်ဆုံးအတန်းသူ/သား တွေရဲ့အချစ်တော်ကြီးဖြစ်လို့. . ပညာတတ်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီး ကျောင်းဆရာမလုပ် မှာတဲ့ဗျား ကျောင်းပိတ်ရက်မှ ဆရာတော်ဘုရားထံခွင့်တောင်းပြီး ဆေးစစ်ပေးရင်း ပင်းတယဘုရားဖူးပို့ပေးရအူးမယ်. .
#မှတ်ချက် ညီမလေးအတွက်လှူဒါန်းပေးကြ ကူညီပေးကြတဲ့ တစ်ဦးချင်း တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အမေလည်းကျန်မာပျော်ရွှင်လျှက်ရှိပြီးသမီးနဲ့အတူနေထိုင်ပါတယ်ဗျ” ဆိုပြီး တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ဒီလို အခက်အခဲရှိနေတဲ့ ဘ၀တွေ အများကြီးရှိပါတယ်.. .ခုလိုကူညီပေးမယ့် လူငယ်လေးတွေလဲ အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်…ခုလို ကူညီတတ်တဲ့ Sai Lu Khay ဆိုတဲ့ လူငယ်လေးရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကတော့ တကယ်ကို လေးစားစရာပါပဲ
သမီးလေးလည်း ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်း ဆရာမကြီးဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်
Source: Sai Lu Khay Fb
ခုတော့ ပရဟိတ လူငယျလေးတဈဦးဖွဈတဲ့ Sai Lu Khay ရဲ့ ကူညီမှုနဲ့အတူ ရပျမိရပျဖတှရေဲ့ ဝိုငျးဝနျးပံ့ပိုးမှုတှကွေောငျ့ သမီးလေးဟာ ကြောငျးတကျနပေါပွီ
အခုတော့လညျး ပထမတနျးမှာ အသှကျဆုံး . စကားအတတျဆုံးအတနျးသူ/သား တှရေဲ့ အခဈြတျောကွီးဖွဈလို့. . ပညာတတျကွီးတဈယောကျဖွဈအောငျကွိုးစားပွီး ကြောငျးဆရာမလုပျ မှာတဲ့ဗြား ကြောငျးပိတျရကျမှ ဆရာတျောဘုရားထံခှငျ့တောငျးပွီး ဆေးစဈပေးရငျး ပငျးတယဘုရားဖူးပို့ပေးရအူးမယျ. .
#မှတျခကျြ ညီမလေးအတှကျလှူဒါနျးပေးကွ ကူညီပေးကွတဲ့ တဈဦးခငျြး တဈယောကျခငျြးစီတိုငျးကိုအထူးကြေးဇူးတငျပါတယျ
သမီးလေးလညျး ရညျရှယျထားတဲ့အတိုငျး ဆရာမကွီးဖွဈပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးပါတယျနျော
“အမေရိကန်မှာ ထီ ပေါက်ဂဏန်း သုည လေးလုံးကြောင့် ထီပေါက်သူအယောက် ၂၀၀၀ ကျော်သွား”
ဆယ်တန်းကို ၂၀၁၈ အထိ ဆက်တိုက်ဖြေလာတာ (၄၈) ခါကျရှုံးပြီး ဒီနှစ် ၂၀၁၉ မှာ...
ရောဂါမျိုးစုံ …၂ ခါလောက်ပြတာနဲ့ ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့…တိုက်ကြီးမြို့နယ် ...
၁၂ထပ်တိုက်ကပ်ရက်ခြံမှာဆောက်တော့ ဘေးအိမ်ရဲ့ အခြေအနေတဲ့ ၁၅၀သိမ်ဖြူလမ်းက...